'ကိုဗစ်-၁၉ ဆေးမြီးတို'အဖြစ် အိန္ဒိယကျောင်းသားတစ်ဦး ဖော်စပ်တဲ့ ချင်းပြုတ်ရည်ကို WHO က အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းမှား ပျံ့နှံ့ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
This picture taken on July 14, 2021 shows people waiting to fill up empty oxygen canisters outsideafactory in Yangon, amidasurge in the number of Covid-19 coronavirus cases. Residents across Myanmar's biggest city are defyingamilitary curfew inadesperate search for oxygen to keep their loved ones breathing asanew coronavirus wave crashes over the coup-wracked country. ( AFP / Ye Aung THU)
'ကိုဗစ်-၁၉ ဆေးမြီးတို'အဖြစ် အိန္ဒိယကျောင်းသားတစ်ဦး ဖော်စပ်တဲ့ ချင်းပြုတ်ရည်ကို WHO က အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းမှား ပျံ့နှံ့
AFP ထိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ သောကြာ 16 ဇူလိုင် 2021 အချိန် 08:56
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကျောင်းသားတစ်ဦးက Covid-19 ကူးစက်မှုကို ရာနှုန်းပြည့် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ချင်းရည်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆေးမြီးတိုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီဆေးကို WHO က အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံထားတယ်လို့ပြောတဲ့ ပို့စ်ကို Facebook ပေါ်မှာ အများအပြား မျှဝေနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအဆိုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Covid-19 တတိယလှိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ အတူ အခုလိုပဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြန်လည်မျှနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ WHO အနေနဲ့ အခုလို အိမ်တွင်းဖြစ် ဆေးဝါးတွေကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားတာ မရှိပါဘူး။
ဒီအဆိုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့က Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ မျှဝေထားပြီး ပြန်လှည်မျှဝေတဲ့ အကြိမ်ရေ ၃၄,၀၀၀ ရှိနေပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က ရိုက်ယူခဲ့တဲ့ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်ရဲ့ screenshot
အဲဒီပို့စ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
မွမ်ဗိုင်းမြို၊ (ဘုံဘေ)မှ အထက်တန်း
ကိုဗစ် 19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက်အိမ်သုံးဆေး
(၁) ငြုပ်ကောင်း ၁ဇွန်း
(၂) ပျားရည် ၂ဇွန်း
(၃) ဂျင်း အရည် အနည်းငယ်
၅ရက်ဆက်တိုက် ကြိုသောက်က ကိုဗစ်19 ရောဂါကို ၁၀၀%
အထူးမှာ။ ။ ကမ္ဘ့ာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ
အတည်ပြုထောက်ခံချက်ရထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။” (မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အကြပ်အတည်းတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး အခုချိန်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းကို ထပ်မံ ရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ AFP ရဲ့အဆိုအရ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာ ၇,၀၀၀ ကျော်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုနဲ ဒီပို့စ်ကို Facebook ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ် နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာ ပြန်လည် မျှဝေထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ် (WHO) ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ Shamila Sharma က ဒီသတင်းဟာ “လုပ်ကြံသတင်း” လို့ AFP ကို အီးမေးလ်ကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“WHO အနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါကာကွယ် ကုသရာတွင် ပဋိဇီဝဆေးများအပါအဝင် အခြားဆေးဝါးတွေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ဖော်စပ် ကုသခြင်းကို အကြံပြုထောက်ခံထားခြင်း မရှိပါ။ ။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကုသခြင်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရာတွင် WHO အနေဖြင့် ဦးဆောင်ပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုများ ဦးဆောင် ပြုလုပ်နေပြီး အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြသွားမည်။” ဆိုပြီး WHO ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ခန့်က ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ဒီအဆိုကို AFP က ဒီလင့်ခ်မှာ မှားယွင်းကြောင်း တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
“ငရုပ်ကောင်း၊ ငရုပ်သီးကို ဟင်းချိုနှင့် အခြားသော ဟင်းရည်များတွင် ထည့်သွင်းစား သုံးခြင်းဖြင့် COVID-19 ရောဂါကို ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်ခြင်း မရှိပါ” ဆိုပြီး ငရုပ်သီး၊ ငရုပ်ကောင်း ရဲ့ COVID-19 အပေါ် အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ် (WHO) က တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
WHO ဝက်ဘ်ဆိုက်က ရယူထားတဲ့ Screenshot